China Axial Pressure elawula Valve mveliso kunye nabenzi | Ikhonkco
Ubungakanani ngokwamagama I-GPR-A100 DN25, 250 (NPS1, 10) I-GPR-A200 DN25 ～ 300 (NPS1 ～ 12)
Uxinzelelo lwegama: I-GPR-A200 CLass150 ukuya kwi-900I-GPR-A100 CLass150 ukuya kuma-600
Umgangatho woyilo EN 334
Uyilo lobushushu -29 ℃ ～ + 60 ℃ ； -46 ℃ ～ + 60 ℃
Izinto zomzimba: A105, A350 LF2, A216 WCB, A352 LCC
Uxinzelelo lokusebenza kunye nobushushu
Isikhululo sokuhambisa irhasi semibhobho emide; Isitishi esilawula uxinzelelo lwegesi; Inkqubo yokulawula uxinzelelo lwegesi njl.
Ephakathi kusebenzayo: Irhasi yendalo, irhasi engonakaliyo
Ubungqina bokuqhuma kunye noKhuseleko kwiklasi: ExdIIBT4, IP65
• Ubume beAxial, umthamo wokuhamba okuphezulu
• Umlinganiso omkhulu onokuhlengahlengiswa, uhlengahlengiso oluchanekileyo, oluzinzileyo
• Uhlobo loyilo lwe-diaphragm eqengqelekayo ye-GPR-A200, efanelekileyo ngakumbi kwinkqubo yokulawula esweni ngokwakho phantsi kwemeko evulekileyo ngokupheleleyo; Uhlobo lwe-GPR-A100 ngoyilo lwe-R engile, yenkqubo yokuzibek 'esweni phantsi kwemeko eqhubekayo yokulungelelanisa
• Isinyithi esineentsimbi kunye nomkhono opholileyo unokusebenza okungcono kokutyibilika kunye nokumelana nomhlwa.
• Izixhobo zokunciphisa ingxolo zinokuxhotyiswa ekuthumeleni nakwimithwalo
• Isalathi sendawo emiselweyo yokuma kwevaluva
• Isixhobo sokuhambisa isivamvo seValve sinokuxhotyiswa
Egqithileyo Ulawulo lweAxial Flow
Okulandelayo: Ukhuseleko lweValve yokuCima
5301 nesonkana esisicaba Swing Khangela Valve
I-3233 AWWA C515 OS & Y yeSango eliQinisekileyo elihleliyo ...
Ngokupheleleyo welding Ball Valve
Isitshizi samanzi esilawula ivalve yoxinzelelo oluphezulu ...